हर-हालतमा कोविड संक्रमण गराउने काम सरकारद्वारा नै गराइँदैछ-प्रश्नोत्तरमा पवन चामलिङ – Sikkim Journal
हर-हालतमा कोविड संक्रमण गराउने काम सरकारद्वारा नै गराइँदैछ-प्रश्नोत्तरमा पवन चामलिङ
“ प्रश्न – कोविड संक्रमणको दोस्रो चरण लम्बिएर गइरहेको अवस्थाबाट तपाईं चिन्तित देखिनुहुन्छ। सिक्किमका मुख्यमन्त्री श्री पी.एस. गोलेले तर आसाममा पत्रकारहरूसँग बोल्दै सिक्किममा दोस्रो चरणको संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको र आत्तिनुपर्ने स्थिति नरहेको वक्तव्य दिए। यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया?
पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ, फाईल फोटो
उत्तर – सिक्किमको कोविड रिपोर्टलाई सरकारले ध्यान दिएर मानवताले आँखाले पढ़िदिने अनुरोध म गर्नचाहन्छु। अहिले सिक्किममा के भइरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नु जरूरी छ। सिक्किममा हालसम्म भएका कोविड मृत्युमध्ये 87 जना अन्य कुनै बिमारी नभएका मानिसहरू छन्। भन्नुको मतलब सिक्किममा हालसम्म कोविडद्वारा मर्नेहरूमध्ये करीब 50 प्रतिशत मानिसहरू अन्य बिमारी नभई मरेका छन्। यी हाम्रा प्रिय मानिसहरूले कोविड दोस्रो चरणमा आफ्ना प्राण गुमाएका हुन्। के यो ”नियन्त्रित स्थितिको” सङ्केत हो र?
हामीले पहिलो र दोस्रो चरणको कोविड मृत्युको आँकड़ालाई तुलना गऱ्यौं भने हालसम्म दोस्रो चरणको मृत्यु दर पहिलो चरणभन्दा 33 प्रतिशत अधिक छ। यसैलाई ”स्थिति नियन्त्रणमा रहेको” मान्नुपर्ने हो कि?
आज बढ़ीभन्दा बढ़ी युवाहरू कोविड19 -को शिकार बन्दैछन्। स्वास्थ्य रिपोर्टले बताए अनुसार पनि 97 डेल्टा प्रवर्गबाट संक्रमितमध्ये 61 जना 35 वर्षभन्दा कम उमेर वर्गका छन्।के यही हो ” नआत्तिनुपर्ने अवस्था”?
राज्य प्रशासन फेरि पनि संक्रमणको दोष निर्दयतापूर्वक जनताको टाउको थोपरेर आफू चोखो बन्ने काम गरिरहेको छ। उनीहरूको भनाइ अनुसार ”धेरै मानिसहरू हस्पिटल नआएका कारण मरेका हुन्।” उनीहरूले बुझ्नुपर्छ कि मानिसहरू धेरै कारणहरूले गर्दा हस्पिटल जान चाहिरहेका छैनन्। केही समयअघि मात्र सिक्किमका माननीय उच्च न्यायालयले कोविडको निम्ति हस्पिटलहरूको तयारीलाई व्यवस्थित र संघनित गर्ने निर्देश राज्य सरकारलाई दिएको थियो। सरकारले जनताको विश्वास जित्नसक्नुपर्दछ, जनतामा जागरूकता फैल्याउनुपर्दछ, र जनतालाई आश्वस्त पार्नसक्नुपर्दछ।
आम जनता मेडिकल एक्सपर्ट हुन्नन्। जनतालाई सरकारले आफ्नो गरी-गराइ, सूचना, सम्पर्क वा सञ्चारद्वारा विश्वस्त बनाउनुसक्नुपर्दछ। यदि कोविड संक्रमित मानिसहरू हस्पिटल आउँदैनन् भने उनीहरू स्वास्थ्य प्रणालीप्रति विश्वस्त छैनन्, र उनीहरू डराइरहेका छन्। यसले के बताउँछ? यसले बताउँछ कि सरकारले कोविड व्यवस्थापनलाई ठीक गर्नुपर्ने जरूरत छ, कोविडको उपचारको लागि हस्पिटलहरूको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने जरूरी छ, जरूरतको हिसाबले जनशक्तिको विकास र विस्तार गर्नुपर्नेछ, थकित भइसकेका कोविड योद्धाहरूलाई यथेष्ट विश्राम दिनुपर्नेछ। अनि जनतालाई विश्वस्त पार्नुपर्नेछ, न कि उनीहरूलाई दोष दिनु।
अहिले सरकारले हताशावश जारी गरेको गाइडलान्सले स्थितिलाई झनै खराब बनाएको छ, र जन-जीवनलाई ज्यादै कठीन तुल्याएको छ। एक जना संक्रमित पाइएमा सम्पूर्ण इलाका वा वार्डलाई नै कन्टेन गर्ने सरकारको फैसला न वैज्ञानिक छ, न सामाजिक दृष्टिले मद्दतगार नै छ। यो भनेको सरकारको हताशाको चरम अवस्था हो। यो हास्यास्पद कुरो हो।
अझ अचम्भ त सरकारले जनतालाई दग्दी दिन र आतङ्कित पार्न सामुहिक चलान गर्नथालेको छ। सिक्किम सरकारले जानेकै जनतालाई असुविधामा धकेल्नु र आतङ्कित पार्नु मात्र छ।उनीहरूले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरूको यो हद दर्जाको बेवकुफीले कुनै कुरालाई पार लाउनेछैन। उनीहरू गाउँ-गाउँलाई कन्टेन गर्दै जनतालाई थप आर्थिक र मानसिक दबाव बढ़ाउने काम गरिरहेका छन्, तर संक्रमण भने घट्नुको साटो उल्टै बढ़्दै गइरहेको छ। अर्को चिन्ताजनक घटना गत बुधबारको दिन गान्तोकको मनन केन्द्रमा आयोजित आजादी का अमृत कार्यक्रममा सहभागी दुई जना व्यक्तिहरू कोविड संक्रमित पाइएका छन्।
संस्कृति विभागको मुख्यालय अहिले कन्टेनमेन्ट जोन भएको छ। संस्कृति विभागले नै यसै कार्यक्रमको अंशको रूपमा कथा वाचन कार्यक्रम पनि आयोजन गरेको थियो, जसमा हाम्रा विद्यार्थीहरूले अंशग्रहण गरेका थिए। जतिखेर पढ़ाइ नै अन्लाइन चलिरहेको छ, त्यतिखेर विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक रूपमा भेला गरेर कार्यक्रम गर्नु बेवकुफी होइन भने के हो?
स्मरण होस्, सरकारले यस अन्तर्गत विभिन्न विभागहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजन गरिरहेको छ। पहिलो चरणको कोविडको प्रारम्भीक अवस्थामा रङ्गेलीमा पार्टी जोइनिङ कार्यक्रमले नपुगेर एसकेएम-ले हर-हालतमा कोविड संक्रमण गराउने काम सरकारद्वारा नै गराइरहेको छ। मुख्यमन्त्री पी.एस. गोलेले ”सिक्किम कोरोना भाइरस वितरण मिसन” नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। उऩी आफूसँग सैंकड़ौं मानिसलाई साथ लिएर जतासुकै घुमिरहेका छन्।
जनताको जीवनसँग अझ उप्रान्त पनि खेलबाड गर्ने काम बन्द गर्न म सरकारलाई चेतावनी दिँदछु। वर्त्तमान प्रशासनलाई कोविडसँग लड़ाइँ गर्ने यथेष्ट समय दिइसकिएको छ, तर सरकार आफै नराम्रो गरी असफल र परास्त भएको छ। सरकारले महामारी विशेषज्ञ, स्थापित डक्टर वा अन्य स्वास्थ्यसेवक तथा आपदा प्रबन्धनका पेशेवरहरूलाई लिएर उच्च स्तरीय कमिटि गठन गरी स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ। मनपरीको नोटिफिकेसन अब बन्द गर्नुपर्छ। अझै पनि नजागे, समयले पर्खिनेछैन। ”